ALEXANDRA CANE ကဘယ်သူလဲ ကျော်ကြားသော EXES နှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်ကျွန်းတစ်ကျွန်းနှင့်တွေ့ဆုံရန် - သတင်း
လက်ဇန္ဒြရားကြံနှင့်တွေ့ဆုံ: အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Instagram ကိုနှင့်ကျော်ကြား exes နှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်ကျွန်းကျွန်း
နှစ်ခုအသစ်သောယောက်ျားလေးများပြီးနောက် Kieran နှင့် Idris ပြီးခဲ့သည့်ညက Love Island ရွာသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ယခုမူကားငါသည်ငြီးငွေ့စရာဖြစ်၏ ဂျော်ဂျီယာ သူမသစ္စာရှိကြောင်းနှင့်ယခုငါသွေးအသစ်လိုချင်နေသည်။
Frankie နှင့်ဂရေ့စ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဤရွာမှထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးယခုကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးအသစ်တစ် ဦး လိုအပ်လာသည်။ အလက်ဇန္ဒွိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။ သူမသည် Hertfordshire မှမိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင် Instagram ဂိမ်းနှင့်ကျော်ကြားသော exes များကစားသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။ ဒီတော့မိန်းကလေးအသစ်အတွက်ဘာအတင်းပြောစရာရှိသေးလဲ။ ဆွေးနွေးကြရအောင်
ဤသည် '' nothin မဟုတ်ပေနွေရာသီယို?
မျှဝေသည် အလက်ဇန္ Louise ကြံ (@alexandralouise__) ဇူလိုင်လ ၇ ရက်၊ ၂၀၁၈ တွင်ည ၁၁ နာရီ ၃၄ မိနစ်တွင် PDT
Alexandra Cane အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။
Love Island villa တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြည့်စွက်ချက်မှာ ၂၇ နှစ်ဖြစ်သည်။ အလက်ဇန္ဒြာမှပြပွဲတွင်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြောခဲ့သည်မှာ 'ငါက villa မှာရှိတဲ့တခြားသူတွေထက်အနည်းငယ်နည်းနည်းကြီးတယ်။
တူသော Mykonos သို့နှုတ်ဆက်သည် ... ?? worry စိတ်မပူပါနဲ့၊ သင်မသိမီငါပြန်လာမည်။ ? ??
မျှဝေသည် အလက်ဇန္ Louise ကြံ (@alexandralouise__) ဇွန် ၂၇ ရက်၊
'ငါကပါတီရဲ့ဘဝနဲ့စိတ်ဓာတ်အမြဲတမ်းရှိတယ်၊ ငါဟာလူရွှင်တော်တစ်ယောက်ပါ။ ငါအမြဲတမ်းစူပါအပြုသဘောပေါ့။ ငါကလူတိုင်းကိုအကောင်းမြင်စေတယ်။ '
သူသည်မိတ်ကပ်ပညာရှင်ဖြစ်ပြီး ၂ နှစ်ခန့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့် Demi Rose အပါအ ၀ င်ကျော်ကြားသောလူများနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူမသည် said: ငါ Demi နှင်းဆီရဲ့မိတ်ကပ်အနုပညာရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးငါနှစ်နှစ်များအတွက်သူမ၏မိတ်ကပ်အနုပညာရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Britney Spears နှင့်အတူ Justin Timberlake အပေါ်ခိုးခဲ့ဘူးတဲ့သူ
ငါ့ကိုကျွန်းများသို့ပြန်ပို့ပါ ဦး ။
မျှဝေသည် အလက်ဇန္ Louise ကြံ 1:21 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 3, 2018 ရက်နေ့တွင် (@alexandralouise__)
သူမနဲ့အတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ Instagram ဟာကြီးမားပါတယ်။ မိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ခဏတာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
သူမသည် X Factor မှ Jake Quickenden နှင့်လည်းတွဲလုပ်ခဲ့ပြီး Chelsea's Alex Mytton တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အလက်ဇန္ဒြာရဲ့ Instagram ကဘာလဲ။
အိုးကလေး၊ မင်းဘယ်ကလာသလဲ ?
မျှဝေသည် အလက်ဇန္ Louise ကြံ (@alexandralouise__) ဇွန် ၂၆ ရက်၊
အလက်ဇန္ဒြာကိန်း (@alexandralouise__) တွင်သူမ၏ကျော်ကြားသောဆက်သွယ်မှုကြောင့် Instagram သုံးစွဲသူ ၁၅၇ ယောက်ကျော်ရှိသည်။ အားလပ်ရက်တွင်သူမ၏ဓာတ်ပုံများကိုစာသားအတိုင်းလိုက်ရုံဖြင့်ကောင်းမွန်သော bikinis များဖြစ်သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုမေးလျှင်ကြည့်ရကျိုးနပ်။
ဆွဲလုပ်ငွေဘယ်လောက် queens ပါဘူး
သူမသည်လက်ရှိတွင် Josh နှင့် Dr. Alex တို့ကိုမျက်စိကျနေသည်။ ဒါကြောင့်သူမဟာအခြေခံအားဖြင့်အရမ်းခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းဒါမှမဟုတ်အလွန်လွယ်ကူတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ သူမက 'ငါတစ်ယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ချင်တယ်။ ငါ Josh အပေါ်ငါ့အအမြင်များ setting တာပါ။ သူကကျွန်တော့်အမျိုးအစားပါ။
မျှဝေသည် အလက်ဇန္ Louise ကြံ 12:51 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 25, 2018 ရက်တွင် (@alexandralouise__)
ဒေါက်တာအဲလက်စ်ဟာငါ့အတွက်ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခံစားမိတယ်။ ကျနော်တို့သူကတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ငါတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့မိပါတယ်ကျနော်တို့နက်ရှိုင်းသောပြောဆိုမှုများအတွက်တကယ်အချို့ရှိချင်ပါတယ်တူသောငါခံစားရတယ်။ မျှော်လင့်ခြင်းငါသည်သူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနည်းနည်းဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ ငါသူ့ကိုသိကျွမ်းချင်ပါတယ်။ '
သူကလူတစ်ယောက်ဆီကဘာကိုရှာနေတာလဲလို့သူမမေးတဲ့အခါသူက 'ငါကိုလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ၊ စာရိတ္တရှိပါစေ။ ငါဟာတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ချစ်တာပဲ။
မျှဝေသည် အလက်ဇန္ Louise ကြံ (@alexandralouise__) ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၁၈ တွင်နံနက် ၈:၅၇ အချိန်၊ PDT တွင်
ထို့အပြင်သူမအလှည့်များတွင် 'ထိပ်ဆုံးမှသူတစ်ယောက်။ ငါသာအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးသဘာဝကျကျသူတစ် ဦး ကြိုက်တယ်။ '
အလက်ဇန္ဒြာသည်ကျော်ကြားသောလူအများနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ခြင်းအပြင်အချို့သူများနှင့်လည်းတွဲဖက်သည်ဟုပြောဆိုသည်။ သူမက“ ငါဂီတအနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ငါအနည်းငယ်ချိန်းတွေ့ခဲ့တယ်။ သို့သော်သူမဤကျော်ကြားသော exes ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ရန်မရှိသေးပါ။
Si လားမဟုတ်ဘူးလား? ?
မျှဝေသည် အလက်ဇန္ Louise ကြံ 9:24 pm တွင် PDT မှာဇွန် 22, 2018 ရက်တွင် (@alexandralouise__)
သူမကဆက်ပြောသည် - 'ငါဟာငါ့ရဲ့ဟောင်းနွမ်းသူအများစုနဲ့သူငယ်ချင်းပါ။ ငါကလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ချိန်ကဂရုစိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရာရာအဆုံးသတ်သွားရင်တောင်ငါလူတွေနဲ့ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းချင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ '
သူမမည်သူမဆိုကိုဘယ်တော့မှလိမ်မည်မဟုတ်သော်လည်းလူသားများသည်တစ်သားတည်းဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်ဟုမထင်ပါက၎င်းကိုနားလည်လိုသည်။ သူမသည် 'မနုaဗေဒပညာရှင်များနှင့်စပီကာများမှစာအုပ်များဖြစ်သောကျွန်ုပ်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းများစွာဖတ်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စိတ်သည်моogamyအပေါ်ကျွန်ုပ်၏အတွေးများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
လျှို့ဝှက်ချက် ။: ဟေးလ်အက်စစ်နဲ့ဂရိသုပ်။
မျှဝေသည် အလက်ဇန္ Louise ကြံ (@alexandralouise__) ဇွန် ၂၀၊ ၂၀၁၈ တွင်ညနေ ၁း၁၅ နာရီ PDT တွင်
“ ကျွန်တော်ဟာတစ်မျိုးတည်းသောလူသားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လူသားတွေအနေနဲ့တကယ်မသိပါဘူး။ ငါကအကြောင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအမျိုးမျိုးကိုအကြောင်းကိုစတင်ဖတ်ခဲ့တယ်။ ငါလိမ်လည်လှည့်စားခြင်းကိုခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးငါသဘောမတူပေမယ့်ငါလိမ်လည်မှုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြိုးစားနားလည်သဘောပေါက်ရန်ငါ့အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှကိုပြုလိမ့်မည်။ ''
သူမရဲ့အဆိုးရွားဆုံးနေ့ကဘာလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းတဲ့အခါအလက်ဇန္ဒြာက 'ငါယောက်ျားတစ်ယောက်တစ်နာရီမတက်ရသေးတဲ့နေ့ကိုသွားတယ်။ ဒါနဲ့သူမပါဘဲမှာထားတယ်၊ ငါ့ရဲ့အစားအစာကိုစားခဲ့တယ်။ ဥပဒေကြမ်း။ '
အလက်ဇန္ဒြာ Louise Cane (@alexandralouise__) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု 8:22 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 19, 2018 ပေါ်မှာ
အလက်ဇန္ဒြာ၏အဆိုအရသူမသည်သူမ၏သူငယ်ချင်းများကိုအသံကျယ်ပြီးအကာအကွယ်ပေးသည်ဟုဆိုသည် သူမသည်သူမကပြောသည် - ငါစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတော်လေးကျယ်လွန်းတယ်။ ဒါ့အပြင်ပုံငါကျယ်လောင်စွာစားကြလော့။ ငါကတစ် ဦး တည်းသောကလေးပဲ။ ဒါကြောင့်ငါ့သူငယ်ချင်းတွေကငါ့မိသားစုပဲ။
'' ကျွန်ုပ်သည် villa အပြင်ဘက်ရှိမိန်းကလေးများနှင့်ကောင်းသော၊ ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးများစွာရရှိပါသည်။ မိန်းကလေးများနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အကြံပေးလိုသည်။ ငါသည်ဤအဆင့်မှာတစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ခြေချောင်းအပေါ်နင်းရန်ရှိသည်သွားပါမယ်။ ငါတတ်နိုင်သလောက်လေးစားမှုရှိချင်တယ်။ လူတိုင်းကိုအစဉ်အမြဲနှစ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ villa မှာသူငယ်ချင်းကောင်းအချို့ကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီးမိုင်ယာမီကိုပြန်သွားပါ ဦး ။ ‍♀️? ☀️? Jumpsuit: @rb_london
မျှဝေသည် အလက်ဇန္ Louise ကြံ (@alexandralouise__) ဇွန် ၁၈၊ ၂၀၁၈ တွင် 3:32 AM PDT တွင်
သူမကိုယ်သူမနှင့် ပတ်သက်၍ သူမဘာကိုနှစ်သက်သလဲဟုမေးမြန်းသောအခါအလက်ဇန္ဒြာက 'ငါ့ယောက်ျားတွေကယောက်ျားတွေကိုမြင်ရမယ့်အရာတွေထဲမှာငါ့မျက်လုံးတွေကဖြစ်နိုင်သည်။ ငါကလူတွေကိုဂရုစိုက်တယ်၊ မင်းဟာငါ့နှလုံးသားရှိရင်မင်းအတွက်ငါအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ် '
၁) ခွဲစိတ်ကုသမှုမခံမီ Megan ၏နောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်ကာလများထက် ပို၍ ထိတ်လန့်စရာဖြစ်သည်
၂။ Kieran Nicholls ကဘယ်သူလဲ။ အဆိုပါ villa ရိုက်ထည့်ရန်ကျွန်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာ Love
၃) Love ကျွန်း၏ Idris အပျိုကညာနှင့်တွေ့ဆုံ: Kaz ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်စစ်တိုက်ခြင်းငှါအဆင်သင့်လိုလားသူလက်ဝှေ့သမား